Izimpungushe ezisebusweni ngobunyovu
Esigqokeni sesigqoko se-fashionista yanamuhla kukhona indawo yomabili amajaji ama- smart and ama-jackets asebenzayo afudumele. Esikhathini sokuqala, owesifazane uzizwa enjengendlovukazi, kanti eyesibili ifudumele futhi ikhululekile ngisho nasebandleni eliqine kakhulu. Uma uhlanganisa lezi zici ezimbili, uzothola ama-jackets aphezulu-phansi ngeboya be-fox.
Amajaji aphansi awesifazane aneboya be-fox: yiziphi izakhi ezihlinzeka ngazo?
Okumangalisa kakhulu, kodwa izingubo zangaphandle ezidingekayo kudingekile phakathi kwabesifazane abaneminyaka yonke. Okokuqala, abaklami bazama futhi bathuthukisa eziningi zokukhetha - kusukela e-classical kuze ku-ultra-yesimanje. Futhi okwesibili, ukuxhumeka okuhlukahlukene kukuvumela ukuba uhlanganise ijaji eliphansi neboya be-fox ngezingubo zanoma yisiphi isitayela.
Kwabesifazane asebekhulile, kunezinhlobo zobude beklasi kancane ngaphansi kwe-hip, ne-strap kanye nesici esilungile. Ezingubo ezinjalo njalo zifudumala futhi zinobuhle, futhi noma yikuphi ijaji ngeke libukeke likhohlisayo. Amafayibha angatholakala endaweni yekholomu, noma eduze komngcele we-hood noma emaceleni emikhono.
Izingane nezinesibindi zingamamodeli afanelekayo we-shadow shammering shades. Ngokuvamile, lawa majazi aphansi angaphansi koboya be- fox anezinga elifinyelelekile cishe ku-hip. Le niche igxilile kakhulu ngemikhiqizo yezemidlalo engenzi nje ukwakha umklamo omuhle, kodwa ufunde ngokucophelela imininingwane ye-cut and ukhethe izinto ezigcina ukushisa nokuvumela umzimba ukuba uphefumule.
Uma ufuna ukukhetha into enhle nenhlekazi, amamodeli afaneleka ubude bamadolo noma aphansi angeke afane nawe. Lona ukhetho oluyinkimbinkimbi kunazo zonke kanye noboya obukhona kakhulu kakhulu. Ngokuvame ukutholakala kwikhola. I-beige noma i-white jacket ene-fox ehlukile ehlukile futhi ibhande e-waistline liyohlobisa owesifazane.
Isikhumba phansi izimpaka ezinezinyosi
Le model engapheli phansi emgqeni futhi ihlala phezulu kwesilinganiso sezithandwa kakhulu. Njengomthetho, ijaji eliphansi elinjalo lenziwa esikhumbeni se-husky, esibheka kakhulu ngenxa yesisu sokuthungwa. Ngendlela, umkhiqizo omuhle kangaka unesimo esihle sokumelana nokugqoka.
Isigqoko sesigqoko sezinwele esinompheme we-fox asiyona ehlukile kancane. Lesi yisigqoko eside se-chic, namabhujethi amasha amahle. Ngokuqondene nombala, khona-ke ngokuvamile kaningi kukhona amajackethi amnyama omnyama, omhlophe noma omnyama. Kunezinhlobonhlobo eziningi ezinamaqabunga ezinemibala ekhanyayo. Kodwa kuncane kakhulu, njengoba umbala wemvelo wesikhumba kuhlangene noboya ubukeka buhle, kodwa isikhumba esidayisiwe asikho kahle kakhulu.
Kuyacaca ukuthi izinto zokwakheka kwemvelo kanye nekhwalithi yokuhlunga kuzothinta intengo yomkhiqizo. Ukukhudlwana koboya obufakiwe futhi isikhathi eside, ukuphakama kwentengo. Ngendlela, izindleko zithinta ikhwalithi yesikhumba. Okubizwa ngokuthi i-eco-lesikhumba kubiza eshibhile kunokwemvelo, kodwa kuqhubeka isikhathi eside.
Izingubo zoboya besifazane ngobuningi boboya be-fox: sizozigqoka ini?
Ngokwalo, umkhiqizo onjalo ubheka ubuciko futhi ukhanga ukubukeka. Yingakho abaklami bengancoma ukuthi bakhethe izingubo nezesekeli ezizokwazi ukuncintisana nezingubo zangaphandle. Isibonelo, ibhokisi elimnyama eligcwele ubisi be-fox lizobukeka lihlambalaza, uma ubeka ikhanda lakho nekhanda lezinwele. Uma enye indlela ongayamukeli, khona-ke kuyodingeka ukhethe i-headpiece, futhi, kusukela enhlokweni bese ukhetha umthunzi ngangokunokwenzeka.
Ijaji eliphansi elinompheme we-fox ngenxa yomthunzi omnyama-omnyama "uyokwenza abangane" ngezingubo zembala ekhanyayo. Ngakho siphephile ngokukhetha izesekeli eziluhlaza okwesibhakabhaka, ezibomvu, ezibomvu, ze-orange kanye namanye amathoni. Kungaba amagilavu, ama-scarves noma izigqoko. Indlela enhle yokudala isimo sengqondo futhi wenze isithombe sasebusika siqhakazile futhi sishintshe.
Ngokuqondene nezicathulo, lapha sisekelwe kwisitayela sezingubo kanye nendawo yokuhlala. Izimpungushe ezisebusweni ezinezinyopho zihlangene ngokufanayo nezibopho eziphakeme, futhi ngezikhumba.
Izikebhe zezinsikazi - ukukhethwa kwezithombe zamamodeli asethempelini kanye nemfashini yenkathi entsha
Izikebhe ezimnyama - ukukhethwa kwezithombe zefashini yezithombe ngezicathulo ezimnyama
Amabhuzu aphezulu ebusika asebesifazane
Izigqoko ezimachashazi ze-polka - izitayela
T-shirts ngokuphrinta - izixazululo zokwakha zangempela kuzo zonke izikhathi
Igqoka elimnyama ngosuku lokuqeda iziqu
Amajackets ezinsheni zentsha
I-sarafan emhlophe - amamodeli amahle kunawo wonke futhi afanelekayo ehlobo
Ama-Jack Jack Down
Izingubo zangaphansi ze-DIM
Kuyini ukuzwelana kwengqondo nokuthi ungayithuthukisa kanjani?
Izinto zokwakha izandiso zezinwele
Ukunciphisa - ukutshala nokunakekelwa emhlabathini ovulekile
Imali yegolide ezimweni
U-Fan 1: UJessica Biel ukhulume ku-Justin Timberlake ngothando
Ama-buds ekhilimu omuncu - iresiphi
Ukufenisha ifenisha kusuka ezikhuni ngezandla zomuntu siqu
Indlela yokufundisa ingane ukuba ilale ubusuku?
Izithombe ezingu-26 zabantu abadumile ngesitayela se-pin-up
Ricky Martin vs. Izitembu ngobungqingili
Nguyiphi ibhulukwe yokugqoka egcwele?
Ukupheka kokudla okuluhlaza nsuku zonke - izinketho ezilula nezomnandi zokudla okuluhlaza
Ukukhula kanye neminye imigomo yenkanyezi yebhola - Lionel Messi
Izibonakaliso zesifo se-mastitis esikhathini sokumisa esikhathini